Mayelana nezandla ezinhle nezinzipho zonke amaphupho wesifazane. Uma upenda izipikili zakho, isikhathi siyofika futhi uzodinga ukusula. Kodwa kunokuba kwenziwe? Manje imakethe igcwele izindlela ezehlukene zokususa i-varnish: nge-acetone futhi ngaphandle kokuqukethwe kwayo, uketshezi oluvuthayo, futhi ngaphandle kokukhethwa kwabakhiqizi kubanzi kakhulu. Ukuze sithole lokho esinakho okuningi okukuthandayo, kudingeka sicabange zonke izinketho.
Ngingasusa kanjani i-nail polish?
Kuzodingeka ukhethe kusukela ezinhlokweni eziningi zezinhlobo zemali, kungaba yiziphuzo ezivamile noma abafaki bezicelo ezimanzi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi uzodingeka ukhethe okuthandayo kumuthi noma ngaphandle kokuqukethwe kwawo.
Ochwepheshe bathi lokho kusho ukuthi ngaphandle kwe-acetone kuyaphazamiseka kakhulu, abomiseli isikhumba sezinyosi futhi banezinto ezivela emifino ekwazi ukuqeda i-lacquer, futhi i-acetone iyingozi kakhulu futhi iyingozi empilweni yethu.
Kodwa uma ubheka ngakolunye uhlangothi lwemali, khona-ke sizocabangela ukuthi izindlela ze-acetone zisebenza kahle, yingakho kulula kakhulu futhi ngokushesha ukususa i-lacquer ngetshe.
Nciphisa inani lokususa i-nail polish!
Uma sipenda izipikili ezinama-varnishes angenambala, kulula kakhulu kithi ukuhlanza izipikili zethu. Yingakho kungenzeka ukuthi usebenzise i-agent kule nqubo ngaphandle kwe-acetone. Futhi uma uthanda imibala ekhanyayo, uzodinga izindlela ezisebenzayo, futhi kuzoba kunoma yikuphi ukuqukethe i-acetone.
Uyazi ukuthi ungagcwalisa kanjani i-nail polish?
Ukhetha ukuthini? I-Vata, i-napkins yamaphepha noma ama-synthetic discs - ukhetha ukuthi yini ongathanda ukuyisebenzisa. Ngemuva kwalokho, i-vel encane ihlala ezinzipikili, ama-discs ngezinye izikhathi ahlukaniswe ngesikhathi esifanele kakhulu, futhi ama-napkins aqhuma. Njengoba uqaphele, ithuluzi elihle, ngakho wonke umuntu uyalikhetha eyedwa. Vele uzame wonke amathuluzi, futhi unquma ukuthi yini okulungile kuwe.
Ngaphandle kwalezi zimali, kusekhona abafakizicelo abakhethekile abafakwe kahle ngetshezi ukuze basuse i-varnish bese behlanza isikhali. Mhlawumbe lolu khetho luzokwenzakala ngokwengeziwe.
Ngakho unqume kuzo zonke izindlela ezifakiwe zokususa i-varnish futhi ungaqhubeka nesenzo.
Imiyalo: kanjani ukususa i-nail polish?
Ngokulandela le miyalo, izipikili zakho ngeke ziphazamiseke futhi zichitheke!
Izandla zakho kufanele zihlanzwe kahle futhi zome.
Etafuleni, beka ithawula noma indwangu yesetafula bese ufake ama-napkins, uma kwenzeka uphelela izindlela zokususa i-varnish (bayalimaza ifenisha ngendlela ephawulekayo). Lungiselela amabhola ambalwa okotini, azokuvumelanisa uma kunenkinga ngokususa i-varnishes ekhanyayo.
Hlanganisa i-cannon yakho ukuze ususe i-varnish.
Namathisela umfakisicelo oswakanyisiwe ku-nail. Akudingekile ukusula i-varnish ngokunyakaza okusheshayo kwe-chaotic, vele ucindezele bese ubamba umfakisicelo kwi-nail emasekhondini angu-30-40.
Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokuqothula umfakisicelo esikhwameni, siholele kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kwesipikili. Uma amasekhondi angu-30-40 ayanele, khona-ke ungakwazi ukususa kalula i-varnish ngokunyakaza okulodwa. Uma i-varnish isala, bese uphinda futhi inqubo.
Uma ushiye i-varnish emaphethelweni e-nail, bese usebenzisa uboya bekotini. Hlanganisa uketshezi, unamathisele, ulinde futhi ususe izinsalela ze-varnish ngokunyakaza okulodwa.
Yenza le nqubo nge-nail ngayinye.
Uma ususa yonke i-varnish, uphilise kahle amanzi, geza izandla zakho ngesephaphu namafutha nge ukhilimu onomsoco.
Futhi uma kukhona isikhathi, ngaphambi kokudweba, yenza izipikili zokuphulukisa nokuqinisa . Isibonelo, eklasini yamanzi afudumele, nciphisa isipuni sesipuni se-iodine kanye nosawoti kasawoti. Uzochitha imizuzu engu-15 kuphela, futhi umphumela ngeke ube yisikhathi eside.
Ngakho usulungele ukuthola umuthi omusha!
Indlela yokwenza umuthi womnyaka omusha ekhaya
Njengezinyoni: I-manicure ye-feather iyindlela entsha ye-nail
Kunokuba i-pedicure ye-hardware iyasiza
Ngingayinika amafayela e-nail?
Ukuxubha kwezandiso ze-nail
Ukunethezeka kweVelor: sifunda ukwenza umuthi we-velvet ekhaya
Amaconsi amnandi kubesifazane
Ama-champignon e-soy-honey marinade
Amanga nokubandlululwa okuhlobene nes cellulite
Ukuhlambalaza ngemifino kanye noshizi ebhodweni
Indlela yokuhlanganisa ukudla kokulahlekelwa isisindo?
Yiluphi uhlobo lokudla kwezingane okufanele lukhethwe
Udokotela wamazinyo odumile uVyacheslav Kaminsky
Isikrini esibuhlaza okwesibhakabhaka njengengxenye yalokho esikusolayo empilweni
Ukwenza kanjani ukukhulelwa kwe-calcium?
Yini ongayiphuza yokukhulelwa?
I-Shark Fat ebusweni
Macaroni kule microwave